दातमा किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार हेर्नुहोस्… « गोर्खाली खबर डटकम
दातमा किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार हेर्नुहोस्…
काठमाडौँ :- एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् । हाम्रो मुख भित्र हुने ७ सय देखी ९ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन् । त्यस मध्येको एक हो एक हो ‘स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया’ ।
बिशेष गरेर गुलिउयो मिठाई खाए पछि दातलाई तुरुन्तै सफा गर्नु पर्दछ । गुलियोमा दात किराले खाने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तर यी सबै गर्दै गर्दै पनि दात किराले खायो भने कसरी त्यसबाट छुटकारा पाउने त ! अपनाउहोस यी घरेलु उपाय ….।कसरी अपनाउने घरेलु उपाय भिडियोमा हेर्नुहोस:-